KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Basque Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Vlax, Russia) Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Sɛn Na Bible No Betumi Aboa Me?​—Ɔfã 1: Kenkan Wo Bible Na Hu Nea Ɛwom
“Mabɔ mmɔden ara sɛ mɛkenkan Bible, nanso mehwɛ sɛnea ɛso no a, ehunahuna me!”​—Briana, 15.
Saa na wote nka? Asɛm yi betumi aboa wo!
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mekenkan Bible?
Ɔkwan bɛn na mɛfa so akan Bible?
Yɛbɔɔ Bible akenkan so ara na w’anim asesa anaa? Sɛ saa a, ntease wom. Ebia wote nka sɛ Bible no sõ dodo, mfoni biara nnim, na ɛnyɛ anika te sɛ TV anaa video.
Wo de hwɛ o: Fa no sɛ woakɔto tete adaka kɛse bi a agude gu mu, anka wo ho rempere wo sɛ wubehu nea ɛwom?
Bible no te sɛ saa adaka no. Nyansasɛm bebree wom a ɛbɛboa wo ama
Woasi gyinae pa
Wo ne w’awofo ntam ayɛ kama
Woanya nnamfo papa
Sɛ nneɛma rehyɛ wo so a woatumi agyina ano
Tete nhoma a akyɛ sei de, ɛbɛyɛ dɛn na atumi aboa yɛn nnɛ? Ebetumi aboa yɛn efisɛ “Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu.” (2 Timoteo 3:16) Wei kyerɛ sɛ, Onii a Bible no mu afotu fi ne hɔ no, obiara nni hɔ a ɔne no sɛ.
Bible no te sɛ adaka bi a agude a ɛsom bo ahyɛ no ma. Nsɛm a ɛbɛma yɛahu nyansa ahyɛ mu ma
Ɔkwan baako ne sɛ wobɛkan Bible no afi ti akosi ti. Woyɛ saa a, ɛno bɛma woahu asɛm a Bible no ka no ani so yiye. Akwan a wubetumi afa so akenkan Bible no dɔɔso. Susuw emu mmienu yi ho hwɛ:
Wubetumi akenkan Bible nhoma 66 no nnidiso nnidiso; efi Genesis kosi Adiyisɛm.
Wubetumi akenkan sɛnea nsɛm sisii wɔ Bible no mu no nnidiso nnidiso.
Nyansahyɛ: Appendix A7 a ɛwɔ New World Translation anaa nhomawa a wɔato din Fa Sua Onyankopɔn Asɛm, Ɔfã 4 no ka Yesu asase so asetena ho nsɛm nnidiso nnidiso.
Ɔkwan a ɛto so mmienu ne sɛ wobɛpaw Bible mu asɛm bi a ɛfa ɔhaw bi a worehyia ho na woakenkan. Ɛho nhwɛso ni:
Wopɛ sɛ wunya nnamfo pa anaa? Kenkan Yonatan ne Dawid adamfofa no ho asɛm. (1 Samuel, ti 18-​20) Afei hwɛ dwumadi krataa a wɔato din “How to Find Loyal Friends,” na nya asuade pii fi saa asɛm no mu.
Wopɛ sɛ wunya ahoɔden de gyina sɔhwɛ ahorow ano? Kenkan sɛnea Yosef ko tiaa sɔhwɛ no ho nsɛm. (Genesis, ti 39) Afei hwɛ dwumadi krataa a wɔato din “How to Resist Temptation . . . Joseph​—Part 1” ne “Falsely Accused! Joseph​—Part 2,” na nya asuade pii fi saa asɛm no mu.
Wopɛ sɛ wuhu sɛnea mpaebɔ betumi aboa wo anaa? Kenkan Nehemia suahu no ho asɛm. (Nehemia, ti 2) Afei hwɛ dwumadi krataa a wɔato din “God Answered His Prayer,” na nya asuade pii fi saa asɛm no mu.
Nyansahyɛ: Sɛ worekenkan Bible a, hwɛ hu sɛ baabi a wowɔ no yɛ dinn na ama woatumi de w’adwene asi nea worekenkan no so.
Ɔkwan a ɛto so mmiɛnsa ne sɛ, paw Bible mu asɛm bi anaa Nnwom nhoma a ɛwɔ Bible mu no fã bi na kenkan. Afei hwɛ sɛnea asɛm no fa wo ho. Wokenkan wie a, bisa wo ho sɛ:
Adɛn nti na Yehowa ma wɔkyerɛw asɛm yi wɔ Bible mu?
Dɛn na asɛm yi ma yehu fa Yehowa su anaa sɛnea ɔyɛ n’ade ho?
Mɛyɛ dɛn de saa asɛm yi ayɛ adwuma wɔ m’asetena mu?
Nyansahyɛ: Wohwɛ New World Translation (Study Edition) mu a, wubenya video, map, ne nneɛma foforo a ɛbɛboa wo ama woanya Bible akenkan so mfaso pa ara.
“Ɛyɛ a mepaw Bible nhoma a m’ani gye ho, na makenkan. Ɛno boa me ma botae a mede asi m’ani so sɛ mɛkenkan Bible daa no, mitumi du ho. Sɛ nhwɛso no, m’ani gye Mmebusɛm nhoma no ho pa ara. Nsɛm a nyansa wom a minya fi saa nhoma no mu no hyɛ me nkuran pa ara.”​—Chloe.
“Mebɔ mmɔden sɛ mɛkenkan Nnwom nhoma no mu nsɛm baako anaa mmienu bi ansa na mada. Wɔn a wɔkyerɛw Nnwom nhoma no, na wɔwɔ atenka te sɛ yɛn ara. Ansa na da biara bɛkɔ awiei no, ehia sɛ yesusuw biribi a ɛhyɛ nkuran ho. Me de, sɛ mekenkan Nnwom nhoma no a, ɛhyɛ me den ma mihu sɛ Yehowa Nyankopɔn na ɔma yenya awerɛkyekye ankasa.”​—Stefan.
Ɛbɛyɛ Dɛn na Bible Atumi Aboa Me?
Nnipa pii ka sɛ Bible deɛ, anansesɛm nko ara. Ebi nso se atwam anaa wokan a, wonte ase. Wɔka saa a, ɛnyɛ nokware koraa.
Share Share Sɛn Na Bible No Betumi Aboa Me?​—Ɔfã 1: Kenkan Wo Bible Na Hu Nea Ɛwom
Mmabun Ka Bible Akenkan Ho Asɛm
Dwumadi a Yɛde Sua Bible